Duolingo dia mamolavola ny mascot azy amin'ny alàlan'ny fanontana "sariitatra" bebe kokoa | Famoronana an-tserasera
Duolingo dia, saika azontsika lazaina, toa ny safidy tsara indrindra hianarana fiteny ary tsy ho very miaraka amin'ny fialamboly iota miaraka amin'ny saika hilalaovana. Fitaovana fianarana izay vao nohatsaraina mba hahatonga ny biby fiompinao ho sariaka kokoa.
Toy izany no fanavaozan'i Duolingo ny biby fiompinao ary izay ahalalantsika amin'izao fotoana izao ity fampiharana ity ho an'ny fianarana nanokatra ny làlana mankamin'ny anglisy, frantsay ary fiteny hafa. Ho an'ity taona ity no tadiavinao ity vahaolana ity hanome rivotra madio kokoa an'io biby fiompy mahafinaritra io.
Ny ekipa Duolingo mihitsy no izye namerina nanamboatra ny biby fiompinao ary avy eo manomboka amin'ny famelana ny asa mankany amin'ny masoivoho natokana ho an'ireo asan'ny famolavolana logo ireo sy maro hafa. Ity famolavolana ity koa dia notontosaina tamin'ny fampiharana ka izay rehetra mifandraika amin'ireo singa hita maso amin'ity fitaovana ity dia azo fitafiana hafa.
Ny endrik'i Duo dia notsorina ka izao dia manana «sary» misimisy kokoa io rivotra io. Ary io koa dia nahitana fanavaozana ireo biby hafa, izay tsy dia fantatra loatra, fa manana ny andraikiny amin'ity fampiharana ity hianatra fiteny alemanina sy hafa.
Ary ny hevi-dehibe hampifandraisana an'i Duolingo amin'ny biby fiompy "sariitatra" faran'izay betsaka dia noho ny fitoviana lehibe amin'ny lalao izay tokony handresentsika ireo ambaratonga handroso. Ao amin'ny tontolo izay misy lehibe ampahany amin'ny fahatanorana dia lany amin'ny lalao, ity safidy ity dia ao anatin'ny fahombiazan'ny Duolingo, ka dia alain'izy ireo miaraka amin'io biby mahatsikaiky io.
Duolingo dia mihoatra ny 300 tapitrisa ankehitriny an'ny mpampiasa voasoratra anarana ary manolotra ny fianarana fiteny 81, ka raha mbola tsy nanam-potoana hanandramana azy ianao dia eo amin'ny fotoana mety amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Duolingo dia mamolavola endrika ny biby fiompinao mba hitia azy bebe kokoa raha azo atao